မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ကျူးဘား သမ္မတ ဖီဒယ်ကတ်စထရို တို့ တွေ့ဆုံ - Yangon Media Group
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ကျူးဘား သမ္မတ ဖီဒယ်ကတ်စထရို တို့ တွေ့ဆုံ
ဟာဗားနား နိုဝင်ဘာ ၂၅
ကွန်မြူနစ်တို့အုပ်ချုပ်သော ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်သည့် ကျူးဘားနိုင်ငံသည် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ၄င်း၏ အာရှမဟာမိတ် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ကူညီနိုင်သည်ဆိုသော ထင်ကြေးပေးမှုများရှိနေသည့်ကြားတွင် ကျူးဘားသမ္မတရာအူးကတ်စထရိုသည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရီယောင်းဟိုနှင့် သောကြာနေ့တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ၄င်းတို့၏ နျူကလီးယားလက်နက်နှင့် ဒုံးကျည်အစီအစဉ်များကို အဆုံးသတ်စေရန် အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းထံမှ မကြုံစဖူးသော ဖိအားများကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ကျူးဘားနိုင်ငံသည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်ကတည်းက မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် အနီးကပ် သံတမန်ဆက်ဆံရေးကို ထားရှိခဲ့သော်လည်း နျူကလီးယားလက်နက်ကိစ္စကိုမူ ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုတွင် ကျူးဘားနိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံက ” ညီအစ်ကိုရင်းပမာ တွေ့ဆုံမှုမှာ နှစ်ဖက်လုံးဟာ နှစ်နိုင်ငံကြားက သမိုင်းဝင် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေအကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမယ့် နိုင်ငံတကာရေးရာ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် ဂျက်စတင်ထရူးဒိုးက မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တင်းမာမှုကို ဖြေရှင်းရန် အတူတကွအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ချေနှင့် ပတ်သက်၍ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် သမ္မတကတ်စထရိုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးနောက် အမေး၊ အဖြေအစီအစဉ်တစ်ခု တွင် ဝန်ကြီးချုပ်ထရူးဒိုးက ” အံ့သြလောက်စရာ ကြားခံတွေကနေ တဆင့်သတင်းစကားတွေ ကျွန်တော်တို့ ပေးပို့နိုင်ပါသလား၊ ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ သမ္မတရာအူးကတ်စထရိုနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ အခုကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ ဒီနှစ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံက ပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖုိ့ မရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ ကနေဒါနိုင်ငံက ပါဝင်လုပ်ဆောင်လို့ရနိုင်မယ့် အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှု မမှန်သက်သေ ထွက်ဆိုသူကို စစ်ဆေးအမိန့် ချနိုင်ရေးအတွက်နည်းလမ်းတကျ လျှေ
မဲဆောက်-ဘန်ကောက် သွားယာဉ် ကုန်တင်ယာဉ်ကို ဝင်တိုက်ပြီး မီးလောင် မြန်မာလုပ်သား ၁၃ ဦး ကားအတွင်
ပြည်သူလူထု တင်ပြထားသည့် ပြဿနာများ ဖြေရှုင်းမပေးသည့် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့??
ဂျေရုဆလင် အရေး မူဆလင်နိုင်ငံများကို အာဒိုဂန် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေ
ရန်ကုန်မြို့မှ မြိတ်မြို့သို့ မောင်းနှင်လာသော ခရီးသည်တင်လေယာဉ် လေကာမှန်ကွဲအက်
Riverdale သရုပ်ဆောင် Camila Mendes နှင့် ရည်းစား အကြောင်း
ပန်းချီပန်းပု ပညာရှင် ညီထွန်း၏ AFFLICTION2တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲတွင် ဝေဒနာနှင့် ပတ်သက်သည့် အခင်းအကျင??